Mayelana Nathi - Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.
Inkampani Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.(I-Hebei Huahai Admixture Co., Ltd.) inkampani yezinto zamakhemikhali zokwakha zobuchwepheshe obuphezulu futhi ikakhulukazi ihlinzeka: usizo lokugaya usimende, impahla eluhlaza usimende, isithako sodaka olomile oluyimpuphu, isithako esixutshwe nodaka olumanzi, izingxube zikakhonkolo i-HPMC(hydroxypropyl methyl cellulose), I-RDP (i-emulsion powder ephindwe kabili), i-HPS (i-hydroxypropyl isitashi ether) ne-PVA (i-Polyvinyl alcohol powder) ne-HPEG.
Ngokuhamba kweminyaka, sizinikele kumakhemikhali e-polymer namakhemikhali amahle kanye ne-R&D ehlobene nezimboni zikasimende.
Kuze kube manje, enezikhungo zokuqapha ikhwalithi ephelele, ezinonjiniyela abayi-17 kanye nabeluleki bezobuchwepheshe abangama-30. Sinikezwe isitifiketi yi-ISO9001: uhlelo lokuphatha ikhwalithi lwango-2015.
Inkampani yethu ingumnikezeli onokwethenjelwa wamakhemikhali athile anemikhiqizo esezingeni elinikezwa abakhiqizi bakasimende abakhulu eChina isikhathi eside. Ukuzibophezela kwikhwalithi nokubambelela emikhawulweni yenze inkampani yakwazi ukwenza okuhle ngesikhathi esifushane ebhizinisini eliqhudelana kakhulu.
Silethe inzuzo enkulu kumakhasimende ethu futhi sawasiza ukuba ehlise izindleko ngokuthuthukisa izinga lemikhiqizo yawo nokusebenza kwawo.
Inkampani yethu iqhutshwa ngabasebenzi abangochwepheshe kakhulu futhi abazinikele abanolwazi olukhulu kulo mkhakha. Uphiko lwe-R & D lwenkampani lugxile ensizakalweni yamakhasimende. Inkampani iphinde yenza imikhiqizo ngendlela oyifisayo ngokuya ngezidingo eziqondile zekhasimende futhi inikeze ukusekelwa endaweni yamakhasimende ekusetshenzisweni kwemikhiqizo.
Ngefilosofi yokusebenza kweKhasimende lokuqala, sinikeze amakhasimende ethu isevisi yenhliziyo yonke futhi sifuna ubambiswano lwebhizinisi olude noluzinzile. Uma sibheka isikhathi eside, sinethemba lokwakha ukubambisana okujulile nabo bonke ozakwethu ukuze kusungulwe indawo enobungani, eyongiwe amandla kanye nokuncishiswa kokukhipha .isimo kubantu.
Sikhetheni, futhi masisebenze ndawonye ukuze sikwenze. Futhi uzojabulela umuzwa wesevisi ye-One-Stop.